Mpamatsy fako mpiorina zezika miorina amin'ny vertical sy zezika | YiZheng
Inona ny tanky fanadiovana volo sy zezika mitsangana?
Tavoahangy fananganana zezika sy zezika manana ny mampiavaka ny vanim-potoanan'ny fermentation fohy, manarona faritra kely sy tontolo iainana sariaka. Ny tanky fermentation aerobic mihidy dia misy rafitra sivy: ny rafitra famahanana, ny reactor silo, ny rafitra drive hidrolika, ny rafitra ventilation, ny rafitra famoahana, ny rafitra lany ary ny deodorization, ny tontonana sy ny rafitra fanaraha-maso elektronika. Ny zezika sy zezika akoho amam-borona dia asaina manampy kely ny mpandray azy toy ny mololo sy ny inokilona mikraoba araka ny atiny hamandoana sy ny sandan'ny hafany. Ny rafi-pisakafoanana dia napetraka ao amin'ny reactor silo, ary ny tazomoka dia amporisihan'ny lelan-tsolika amin'ny motera mba hamoronana fanjakana mitabataba tsy mitohy ao amin'ny silo. Mandritra izany fotoana izany, ny fitaovana fanarenana sy ny hafanana amin'ireo fitaovana dia manome rivotra mafana maina ho an'ny lelan'ny impeller aeration. Ny habakabaka hafanana manao fanamainana dia miforona ao ambadiky ny ravina, izay mifandraika tanteraka amin'ny fitaovana ho an'ny famatsiana oksizenina sy famindrana hafanana, dehumidification ary rivotra. Angonina ny rivotra ary tsaboina avy eo ambanin'ny silo amin'ny alàlan'ny stack. Ny mari-pana ao anaty tanky mandritra ny fanamasinana dia mety hahatratra 65-83 ° C, izay afaka miantoka ny famonoana ireo pathogen isan-karazany. Ny hamandoan'ny akora aorian'ny fanamasinana dia manodidina ny 35%, ary ny vokatra farany dia azo antoka sy tsy mampidi-doza zezika. Ny reaktor dia mikatona tanteraka. Aorian'ny fanangonana ny fofona amin'ny alàlan'ny fantsom-panafody ambony dia hosasana sy esorina amin'ny alàlan'ny famafazana rano izy ary avoaka amin'ny fenitra. Izy io dia taranaka vaovao misy tanky fermentation zezika biolojika izay mety amin'ny faritra samihafa, miorina amin'ny fitaovana mitovy amin'izany ary amin'ny alàlan'ny fanatsarana sy fanavaozana. Haavo teknolojia avo lenta ary ankafizin'ny ankamaroan'ny tsena.
Inona no ampiasaina amin'ny tanky fanadiovana volo sy zezika mitsangana?
1.Ny fako mitsivalana sy ny zezika fametahana zezika dia azo ampiasaina amin'ny fitsaboana zezika kisoa, zezika akoho, zezika omby, zezika ondry, fako holatra, fako fanafody sinoa, mololo vokatra ary fako biolojika hafa.
2. Mila adiny 10 fotsiny mba hamenoana ny fizotran'ny fitsaboana tsy mampidi-doza, izay manana tombony amin'ny firakofana kely kokoa (10-30 metatra toradroa ihany ny velaran'ny masinina fanitsiana).
3. Ity no safidy tsara indrindra hahitana ny fampiasana loharanom-pahalalana ho an'ny orinasa fambolena, fambolena boribory, fambolena ekolojika.
4. Ho fanampin'izay, arakaraka ny fitakian'ny mpanjifa dia afaka manamboatra 50-150m3 samy hafa fahaiza-manao sy endrika samy hafa (marindrano, mitsangana) ny tanky fermentation.
5. Amin'ny fizotran'ny fermentation, ny aeration, ny fifehezana ny mari-pana, ny fikorontanana ary ny deodorization dia azo fehezina ho azy.
Fitaovana fako miendrika volo sy zezika mitsangana
1.Ny fanadiovana an-tserasera CIP sy fanafoanana ny SIP (121 ° C / 0.1MPa);
2. Araka ny fitakiana ny fahadiovana, ny firafitry ny firafitra dia tena maha-olona sy mora ampiasaina.
3. Famaritana mifanaraka amin'ny savaivony sy ny haavony; arakaraka ny filàna ampanjifaina ny fampifangaroana fitaovana, noho izany ny fitsitsiana angovo, ny fanetsiketsehana, ny vokan'ny fermentation dia tsara.
4. Ny tanky ao anatiny dia misy ny fitsaboana poloney ambonimbony (ny fahasarotana Ra dia ambany noho ny 0,4 mm). Ny outlet rehetra, ny fitaratra, ny lavaka ary ny sisa.
Tombony azo amin'ny fako mitsangana sy zezika tanky
•Volavola mitsangana maka toerana kely hipetrahana
•Manakatona na manisy tombo-kase ny fermentation, tsy misy fofona amin'ny rivotra
•Fampiharana malalaka amin'ny fitsaboana tanàna / fiainana / sakafo / zaridaina / fako
•Fanafanana herinaratra hamindrana solika miaraka amin'ny insulate termal vita amin'ny landihazo
•Ny ao anaty dia mety ho takelaka vy tsy misy fangarony amin'ny 4-8mm
•Miaraka amin'ny palitao mitaingina mba hanatsarana ny mari-pana momba ny zezika
•Miaraka amin'ny kabinetran'ny herinaratra hifehezana ny mari-pana ho azy
•Mora ampiasaina ary tazomy ary afaka mahatratra ny fanadiovan-tena
•Ny vatan'ny fampifangaroana amin'ny paddle dia mety hahatratra ny fitaovana fampifangaroana sy fampifangaroana feno
Teo aloha: Turner fanodinana visy roa
Manaraka: Fitaovana fanaovana composting karazana Forklift